News - Waxaan kuugu hambalyeynayaa guusha "Guul Labaad"
Sannadkan, SNS ma aysan dhaafin oo keliya shahaado-siinta dufcaddii ugu horreysay ee shirkadaha teknolojiyadda sare ee Gobolka Zhejiang sannadka 2020, lambarka taxana waa 2583. Oo wuxuu ku guuleystay shahaadada "Zhejiang Science and Technology Small and Medium-size" oo ay soo saartay sayniska Zhejiang iyo Waaxda Teknolojiyada.
Sanadihii la soo dhaafay, SNS waxay si isdaba joog ah u kordhisay tababbarkeeda iyo maalgashiga kooxaha R&D, si isdaba-joog ah loo habeeyay habab, teknoolojiyad casri ah, iyo soo saarid alaabooyin cusub, waxayna sameysay shaybaar tijaabo ah oo lagu kalsoonaan karo oo loo yaqaan 'solenoid valve' oo si wada jir ah ula leh Jaamacadda Zhejiang. Hal sano oo kaliya laga bilaabo 2019 ilaa 2020, 13 shatiyada ayaa la dalbaday (oo ay kujiraan 3 shatiyada curinta, 8 noocyada utility, iyo 2 shatiyada muuqaalka).
Natiijooyinka wanaagsan waa dhiirigelin, laakiin sidoo kale dhiirrigeliya. Ku tiirsanaanta tikniyoolajiyadda, SNS waxay sii wadaa hal-abuurnimada, kordhinta maal-gashiga R&D, kobcinta awooda horumarka shirkadaha, iyo hagaajinta sumadda shirkadda. In macaamiisha loo fidiyo adeegyo wax ku ool ah. Bixiyaan taageero farsamo oo xoog leh mustaqbalka mustaqbalka shirkadda ee tayada sare leh!